waxaa maamula 20-06-13
——— orodka orodka 11-dheer ee orodka Madaxweynihii 11-aad ee Kkkoman zhenji food co., Ltd. orodkiisii ​​orodka dhaadheer waxaa la qabtay Juun 15, 2019. Guud ahaan 394 ka-qaybgalayaal Waxay u qaybsan yihiin afar kooxood iyadoo loo eegayo ag ...
——Tartanka buurta 6aad ee shaqaalaha buuraha Tartanka sanadlaha ah ee shaqaalaha buuraha eek u yaal kurkoman zhenji co., Ltd. waxaa lagu qabtay May 11,2019 buur fenglong ah sidii loo qorsheeyay. Ku dhawaad ​​400 oo shaqaale ah iyo xubnahooda qoyska dhow ayaa ka qeybgalay tartan sanadle ah. Fasaxa ...
La dagaallama cudurka faafa, muuji jacayl, ilaali nolosha dadka - - zhenji ayaa shaqeynaya
Dhawaan, iyada oo la raacayo hoggaanka xisbiga iyo kan gobolka, bulshada oo dhami ay ku lug yeelatay dagaalka cusub ee coronavirus. Dhacdadan lama filaanka ahayd waxay taabatay quluubta qof walba. Laga soo bilaabo dowladda dhexe iyo tan dowladda hoose, waxaan si dhow uga shaqeynaynaa aruurinta lacagaha oo aan qaadno ficillo firfircoon.